အဘဖေါ ရဲ့ အမေရိက ၊ ကနေဒါ သွား ပေါ်တာ တောလား – ၁၇ ( Las Vegas Night Views & Mirage’s Volcano ) ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Travel » အဘဖေါ ရဲ့ အမေရိက ၊ ကနေဒါ သွား ပေါ်တာ တောလား – ၁၇ ( Las Vegas Night Views & Mirage’s Volcano ) ။	9
Posted by Foreign Resident on Mar 10, 2016 in Travel |9comments
အဘလဲ Amusement Ride တွေကိုစီးပြီး ၊
ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး အခန်းထဲကို ပြန်ဆင်းလာချိန်မှာ ၊
မဟေသီက အနားယူ ရေမိုးချိုး အဝတ်အစားလဲပြီး ၊
သူ Favourite ဖြစ်တဲ့ shopping သွားဖို့ Ready ဖြစ်နေပါပြီ ။
မနေ့က ညနေပိုင်း နေ့တစ်ဝက်လုံး အချိန်ကုန်ခံပြီး ၊
Las Vegas North Premium Outlet မှာ ဈေးဝယ်ခဲ့ပြီးပေမယ့်  ၊
အားမရနိုင်သေးဘဲ Las Vegas South Premium Outlet သွားဦးမတဲ့ ။
ဒါနှင့်ဘဲ အဘတို့လည်း ထုံးစံအတိုင်း SDX Bus ကိုစီးပြီး ၊
Las Vegas ရဲ့ တောင်ဘက် အစွန်းကို ထွက်လာခဲ့ပါတယ် ။
SDX Bus ရဲ့ တောင်ဘက် ဂိတ်ဆုံးက Las Vegas South Premium Outlet ပါ ။
Las Vegas South Premium Outlet ဟာ ၊
Las Vegas North Premium Outlet ထက် နဲနဲ သေးပါတယ် ။
Brand တွေကတော့ နဲနဲစီ ကွဲ / ကွာ ကြပါတယ် ။
17. Las Vegas South Premium Outlet
Las Vegas South Premium Outlet အတွင်း မြင်ကွင်း ။
17. Las Vegas South Premium Outlet အတွင်း မြင်ကွင်း ။
ထုံးစံအတိုင်းပါဘဲ မဟေသီဟာ မနေ့က ညနေပိုင်းမှာ ၊
Las Vegas North Premium Outlet မှာ ဈေး အများကြီး ဝယ်ခဲ့ပြီးပေမယ့်  ၊
အခု Las Vegas South Premium Outlet မှာလဲ ထပ်ဝယ်နေတုန်းပါဘဲ ။
အဘကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပါဘဲ ဆိုင်အပြင် ခုံတန်းမှာဘဲ စောင့်ပေါ့လေ ။
Las Vegas South Premium Outlet မှာ ၃ / ၄ နာရီ ဈေးဝယ်ပြီးချိန်မှာတော့ ၊
အဘတို့လဲ တည်းတဲ့ ဟိုတယ်ကိုဘဲ တန်းပြန်လာခဲ့ရပါတယ် ။
တခြားသွားချင်လို့လဲ မရဘူးလေ ၊ ပစ္စည်းတွေ တပြုံ ကြီးနှင့်ဟာကိုး ။
နေ့လည်စာကို skip လုပ်ထားတော့ ဗိုက်ကလဲ ဆာနေပြီလေ ။
ဒါနှင့်ဘဲ လွယ်လွယ်ကူကူ အဘတို့ တည်းတဲ့ Stratosphere Tower ဟိုတယ် မှာ ၊
ဖွင့်ထားတဲ့ Restaurent မှာဘဲ Buffet Dinner စားလိုက်ကြတယ် ။
တည်းတဲ့ Stratosphere Tower ဟိုတယ် က Buffet Dinner ။
17. တည်းတဲ့ Stratosphere Tower ဟိုတယ် က Buffet Dinner ။
Las Vegas Strip ရဲ့ နာမည်ကျော် Night View 1 ။
17. Las Vegas Strip ရဲ့ နာမည်ကျော် Night View 1 ။
Las Vegas Strip ရဲ့ နာမည်ကျော် Night View2။
17. Las Vegas Strip ရဲ့ နာမည်ကျော် Night View2။
ညစာစားပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ ၊ Las Vegas Strip ရဲ့ ၊
နာမည်ကျော် Night Life ကို လှည့်ပါတ်ကြည့်ကြတာပေါ့ ။
သိပ်ပြီးတော့ ထူးပြီးပြောမနေတော့ပါဘူး ၊ အရမ်း လှပါတယ် ၊ ဒါဘဲပေါ့ ။
ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး တစ်နေရာထဲမှာ စုပြုံပြင်ဆင် အလှပြိုင်နေကြတာကိုး ။
Las Vegas Strip ရဲ့ နာမည်ကျော် Night View3။
17. Las Vegas Strip ရဲ့ နာမည်ကျော် Night View3။
Las Vegas Strip ရဲ့ နာမည်ကျော် Night View4။
17. Las Vegas Strip ရဲ့ နာမည်ကျော် Night View4။
Las Vegas Strip ရဲ့ နာမည်ကျော် Night View5။
17. Las Vegas Strip ရဲ့ နာမည်ကျော် Night View5။
ညအလှတွေထဲက နာမည်ကြီးတာ တစ်ခုက ၊
Mirage Hotel ရှေ့က ရေကန်ထဲမှာ မီးတောင် ပေါက်ကွဲပုံ ပြကွက်ပါ ။
ည ၈ နာရီ နှင့် ၉ နာရီ တိုင်းမှာ ညစဉ် ပြသပါတယ် ။
လာကြည့်တဲ့သူတွေ ကြိတ်ကြိတ်တိုးကြားထဲမှာ စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့လေ ။
မီးတောင် ပေါက်ကွဲပြမယ့် Mirage Hotel ရှေ့က ရေကန် ။
17. မီးတောင် ပေါက်ကွဲပြမယ့် Mirage Hotel ရှေ့က ရေကန် ။
Mirage Hotel ရှေ့က ရေကန်ထဲမှာ မီးတောင် ပေါက်ကွဲပုံ ပြကွက် ။
17. Mirage Hotel ရှေ့က ရေကန်ထဲမှာ မီးတောင် ပေါက်ကွဲပုံ ပြကွက် ။
Treasure Island Hotel ရှေ့က ရွက်သင်္ဘောကြီး ။
17. Treasure Island Hotel ရှေ့က ရွက်သင်္ဘောကြီး ။
ဟဲ ဟဲ ၊ ရွာသူားတို့ ဗဟုသုတရအောင် ပြောရရင် ၊
ညအခါ Las Vegas ရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ လျှောက်တဲ့အခါ ၊
ဒါမျိုး ကြော်ငြာ ကဒ်လေးတွေတော့ အများကြီး အကမ်းခံရတာပေါ့လေ ။
17. ဒါမျိုး ကြော်ငြာ ကဒ်လေးတွေတော့ အများကြီး အကမ်းခံရတာပေါ့လေ ။
အဘမှာတော့ ၊ ဒါမျိုးတွေ စိတ်မဝင်စားသူမို့ မတုန်လှုပ်လှပါဘူး ။
( ဟဲ ဟဲ ၊ မဟေသီ ရဲ့ အနီးကပ် ထိမ်းကွပ်မှုအောက်မှာ ဆိုတော့ကာ )
သိပ်ပြီးလဲ အယုံအကြည် မရှိ / ကြောက်တာလဲ ပါသပေါ့လေ ။
ပုံတွေ ကြည့်ပါလား ။ ညာ အစွန် နှင့် ဘယ် အစွန် ကောင်မလေး ၂ ယောက်က ၊
ရုပ်တွေတူပြီး ၊ နာမည် နှင့် ဖုန်းနံပါတ်တွေက လွဲနေတယ်လေ ။
နောက်ပြီး ၊ ဈေးကကျတော့ No Hidden Fees 35 $ တဲ့ကွယ် ။
ဈေးက အရမ်းနည်းလွန်းနေတယ် ။ ဒါဟာ ပုံမှန် မဟုတ်ဘူး ။
ပိုပြီးတောင် ကြောက်စရာ ကောင်းသေး ။ တော်ပါပြီ ။
ညအလှတွေ လှည့်ပါတ်ကြည့်ပြီးတော့ Hotel ပြန်ရောက်တော့ ၊
Strato Sphere Tower အပေါ်ဆုံးကိုတက်ပြီး ၊
Las Vegas မြို့ကြီးရဲ့ ညမြင်ကွင်းကို ၊
အပေါ်စီးကနေ အေးအေးဆေးဆေး ကြည့်လိုက်ပါသေးတယ် ။
အဘဖေါ ( F R )
ယှဉ်ကြည့်လို့ရအောင် Las Vegas ရဲ့ နေဝင်ကာစ မြင်ကွင်း ။
17. ယှဉ်ကြည့်လို့ရအောင် Las Vegas ရဲ့ နေဝင်ကာစ မြင်ကွင်း ။
Las Vegas မြို့ကြီးရဲ့ ညမြင်ကွင်း 1 ။
17. Las Vegas မြို့ကြီးရဲ့ ညမြင်ကွင်း 1 ။
Las Vegas မြို့ကြီးရဲ့ ညမြင်ကွင်း2။
17. Las Vegas မြို့ကြီးရဲ့ ညမြင်ကွင်း2။
Foreign Resident says: အဘ ရဲ့ တောလား – ၁၆ နှင့် ၁၇ ကြားမှာ ၊
အချိန် တော်တော်ဟ သွားတဲ့အတွက် ၊
ရွာသူားများ ကို တောင်းပန်ပါတယ်ကွယ် ။
ဖြစ်ပုံက ၊ အဘလဲ သြဇီပြန်ဖို့ သင်္ဘောက မဆင်းခင်မှာ ၊
Owner က လူသစ် Capt အသားမကျသေးခင် ဖြစ်မှာ စိုးလို့ ဆိုပြီး ၊
သင်္ဘောမှာ ရှိရှိသမျှ Survey မှန်သမျှ ၁၀ ခုလောက်ကို ၊
အဘ သင်္ဘောက မဆင်းခင်မှာ အားလုံး စုပြုံလုပ် ။
သင်္ဘောက ဆင်းပြီးပြန်တော့လည်း ၊ ရန်ကုန်မှာ ( သြဇီ မပြန်ခင် ) ၊
ရှိရှိသမျှ Up-grading & Up-dating သင်တန်းတွေ စုပြုံတက်ရ ။
ပြီးတာနှင့် သြဇီကို အသည်းအသန်ပြန် ။
သြဇီ ရောက်ပြန်တော့လည်း အောက်တိုဘာ နိုဝင်ဘာ မှာ သွားမယ့် ၊
တူရကီ နှင့် ဂရိ ခရီးစဉ်အတွက် Visa အချိန်မှီရအောင် အသည်းအသန်လျှောက် ။
အောက်တိုဘာ နိုဝင်ဘာ မှာ တူရကီ နှင့် ဂရိ သွား ။
တူရကီ နှင့် ဂရိ ကပြန်ရောက်တာနှင့် ၊
အဘ မိဘတွေ သြဇီလာလည်ဖို့အတွက် Visa ကိစ္စ များမြောင် လုပ် ။
ဒီဇင်ဘာ နှင့် ဇန်နဝါရီမှာ သြဇီလာလည်တဲ့ အဘ မိဘတွေ နှင့် ၊
Great Barrier Reef ၊ Blue Mountain စသဖြင့် လျှောက်လည် ။
မိဘတွေ သြဇီက ပြန်သွားတာနှင့် အခု မတ် ဧပြီ မှာသွားမယ့် ၊
ဘရာဇီး ၊ အာဂျင်တီးနား ၊ ပီရူး Visa ကိုလျှောက် ။
ကြားထဲမှာ ဆေးရုံတက် မေ့ဆေးပေးပြီး ၊
Minor Operation တစ်ခု ခွဲလိုက်ရသေးတယ် ။
အခုမှဘဲ ဘရာဇီး ၊ အာဂျင်တီးနား ၊ ပီရူး Visa ကိစ္စတွေပြီး ၊
ဆေးရုံတက် ခွဲတဲ့ ကိစ္စ ကလည်း ကောင်းကောင်း Recovery ဖြစ်လာလို့ ၊
ဒီ တောလား ကိစ္စဖက်ကို ပြန်လှည့်နိုင်တော့တယ် ။
ဝူးးးးးး ၊ လူ့ဘဝကြီး မလည်း ၊ နေရတာ မချောင်ပါလားကွယ် ။
ခင်ဇော် says: အဲလို ပရီမီယမ် အောက်လက်တွေကျ ဈေးက ပြောပလောက်အောင် သက်သာသလား အဘ?
Foreign Resident says: ပြောရမယ် ဆိုရင် အဲ့ဒီ Premium Outlet တွေကဈေးက ၊
သြဇီက ဈေးတွေထက်စာရင် ပုံမှန် / အနဲဆုံး ၃၀% သက်သာတယ် ။
အဲ့ဒါအပြင် အထူး ထပ်လျှော့တာ ကြုံ ရင် ၅၀% လောက်သက်သာတယ် ။
LV North PO တုန်းက ၊ အဘတို့ ညနေ ၅ နာရီ ပြန်ခါနီး ၊
မောလို့ ခဏ ထိုင်နေတုန်းမှာ Coach က Extra Discount ဆိုပြီး ၊
၂၅ % ထပ်လျှော့တဲ့ ကူပွန်တွေ လာဝေတယ်လေ ။
အဲ့ဒမှာ မပြန်ဖြစ်ဘဲ ဝက်ဝက်ကွဲ ထပ်ဝယ်ဖြစ်သပေါ့ ။
Coach လက်ကိုင်အိတ် တစ်လုံးကို ဒေါ်လှ ၂၀၀ အောက် နှင့် ရခဲ့တယ် ။
သြဇီမှာ ဒေါ်လှ ၂၀၀ အောက် နှင့် ပိုက်ဆံအိတ်တောင် မရလောက်ဘူး ။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ကြော်ငြာဒေ ဘယ်လောက်ဘိုး မြည်းခဲ့လဲ တင်ပေးဦး
Foreign Resident says: ” ဘယ်လောက်ဘိုး မြည်းခဲ့လဲ ”
ဟဲ ဟဲ ၊ မဟေသီ ရဲ့ အနီးကပ် ထိမ်းကွပ်မှုအောက်မှာပါဆို ။
Ma Ma says: အဘဖောရဲ့ တောလားကိုဖတ်ပြီး ခရီးသွားချင်တာထက်…….
(အထူး ထပ်လျှော့တာ ကြုံ ရင် ၅၀% လောက်သက်သာတယ် ။) ဆိုတာကို ပိုပြီး သဘောကျသွားတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12200
Thint Aye Yeik says: ညမြင်ကွင်းတွေ လှချက်. . .
kai says: လပ်စ်ဗေးဂတ်က.. ပြည့်တန်ဆာတရားဝင်မြို့မို့.. အဲဒါနဲ့လုပ်စားနေကြသူတွေ.. လိမ်တာနည်းပါတယ်…
အဲဒီမှာ ပြထားတဲ့ငွေက.. ပထမအဆင့်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်…။
lap dance ကရင်.. ၃၅၊ ထိကိုင်လို့ရင်. ..၇၀ …။ စသဖြင့် ရာထောင်သောင်း.. တက်သွားမှာဗျ…။
သူတို့က ပိုတောင်ကြောက်သေး.. သေသေချာချာ ဈေးအရင်ကြိုညှိပြောတယ်ဆိုပဲဗျ..။
သူညားပြောပြတာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4116
” lap dance ကရင်.. ၃၅၊ ထိကိုင်လို့ရင်. ..၇၀ …။ စသဖြင့် ”
သူကြီးကတော့ တော်ပါပေတယ် ၊ သိပါပေတယ်ဗျာ ။
သူတို့ ဈေးတွေကို မယုံသင်္ကာရှိလို့ ၊
သူတို့ ရေးထားတဲ့ Web Page ကို ဝင်ကြည့်မိတယ် ။
တကယ့် ဈေးအမှန်က around $250 per hour – per girl တဲ့ ။
” Escorts in Las Vegas are usually hesitant to quote exact rates because conditions almost always change. When inquiring to an escort service about rates the normal range is around $250 per hour – per girl requested – plus tips based on performance requested. ”